भान्साको ओखती : कब्जियत भएमा के गर्ने ? - Yohosamachar
भान्साको ओखती : कब्जियत भएमा के गर्ने ?
April 7, 2020 April 7, 2020 योहो समाचार	0 Comments
कब्जियत एक यस्तो स्थिति हो, जो पेट ठिक ढंगले सफा हुन पाउँदैन। साथै, मल त्याग गरेको समयमा कष्ट हुन्छ। कब्जियत पीडित आम व्यक्तिको तुलनामा कम शौच गर्छन् । सामान्य व्यक्तिले दिनहुँ मल त्याग गर्छन् । तर, जसलाई कब्जियत छ, उनीहरु दुई/तीन दिनसम्म पनि शौच गर्न सकिरहेका हुँदैनन्।
-बासी खानेकुरा सेवन ।
-शारीरिक रुपमा निष्कृय हुनु वा लामो समयसम्म विश्राम लिने बानी ।
-अति चिल्लोचाप्लो एवं अपाच्य भोजन ।
-पानी कम पिउनु ।
-खाना खाएको समय धेरै पानी पिउनु ।
-गरम मसलायुक्त एवं मसलेदार खानेकुरा खानु ।
कब्जियत खराब दिनचर्या र खानपानको कारण हुनेगर्छ । त्यसैले सक्रिय जीवन बिताउनुपर्छ । शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार स्वस्थ्य र सुपाच्य भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । फाइबरयुक्त सब्जी, फलफूल र सलादको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । यससँगै व्यायाम पनि आवश्यक हुन्छ । दिसा-पिसाबलाई लामो समय रोकेर राख्न हुँदैन ।
-त्रिफला चूर्ण दुई चम्चा हल्का तातो पानीमा घोले नियमित रुपले राति सुत्नुअघि सेवन गर्नुपर्छ ।
– मनतातो दूध वा पानीमा हर्रा-बर्रा र अमलाको समान मात्रामा तयार गरिएको चूर्ण राति सुत्नुअघि सेवन गर्नुपर्छ ।
-कब्जियतको उपचारमा किसमिस एकदमै उपयोगी मानिन्छ । आठ वटा जति किसमिस तातो दूधमा उमालेर नियमित सेवन गर्नुपर्छ ।
-पेटको रोगमा एकदमै उपयोगी हुन्छ, मेवा ।
-स्याउ र अंगुरको सेवनबाट पनि कब्जियतको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
-अमलाको चूर्णले कब्जियतको समस्याबाट मुक्ति दिन्छ ।
-गोलभेडा सेवन गर्दा कब्जियत ठिक हुन्छ ।
-तामाको भाँडामा राखिएको पानीमा थोरै नुन हाल्ने र बिहान खाली पेटमा पिउने गर्नुपर्छ ।
-पानी भरपुर पिउने
माथिका सबै उपायहरुका बाबजुद कब्जियत निवारणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ व्यायाम । स्वस्थ शरीरका लागि एक्सरसाइज अति आवश्यक हुन्छ । योग वा प्राणायामले पनि यसलाई ठिक गर्नसक्छ ।
← जब शरीरको स्टामिना घट्छ
थाहा पाउनुहोस् १६ संस्कारको रहस्य, जसले हामीलाई पथभ्रष्ट हुन दिँदैन →